Daawada Root Isotretinoin (4759-48-2) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Duufka Isotretinoin
SKU: 4759-48-2. Category: Qaar kale waxay
AASraw wuxuu la leeyahay karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Isotretinoin (4759-48-2), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Isotretinoin, oo sidoo kale loo yaqaano 13-cis-retinoic acid, waa daawo asal ahaan loo isticmaalo si loo daaweeyo finanka daran. Marar dhif ah, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in looga hortago kansarka maqaarka qaarkood (kiniin-isku-buuqa kansarka), iyo daaweynta kansarrada kale. Waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo nooca 'echthyosis' nooca 'bacterial venous thrombosis', caadi ahaan jirada maqaarka oo halis ah, iyo ichthyosis lamelmo. Isomeeriyaha, tretinoin, sidoo kale waa daroogada finanka.
Fiidiyowga Isotretinoin Daawada
Root Isotretinoin Calaamadaha aasaasiga ah
Color: Biyo budo ah ama huruud ah
Isticmaalka budada ah ee loo yaqaan 'Raw Isotretinoin'
Noocyada Root Isotretinoin
Isotretinoin waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Absorica, Accutane, Amnesteem, Isotretinoin (CAS 4759-48-2), Claravis, Sotret.
Isticmaalka budada loo adeegsado budada Isotretinoin
Dadka waayeelka ah, Isotretinoin waa in afka laga qaataa 0.25-0.5mg wakhti, laba jeer maalintii. Inta badan 2mg maalintii, wax ka badan toddobaad 20.
Digniin ku saabsan budada Root Isotretinoin
Waxaad xasaasiyad ku leedahay walax kasta ee isotretinoin ama fitamiin A
• Aad uur leedahay, uur yeelan kartid, ama haddii aad qorshaynaysid inaad uur yeelatid
Waxaad tahay naas-nuujin.
Waxyeelada yar-yar waxaa ka mid ah: dibnaha iyo afkiisa, barar yaryar oo indhaha ah ama dibnaha, maqaarka dildillaaca, bur-burka, caloosha oo kacsan, ama timo khafiif ah.
Isotretinoin waxaa loogu talagalay astaamaha cystic finan iyo finanka oo aan ka jawaabin daaweynaha kale. Dhakhaatiir badan oo maqaarka ah ayaa sidoo kale taageeraya isticmaalka daaweynta heerarka hoose ee finanka taasoo caddaynaysa adkeysiga daaweynta kale, ama keena nabar jidheed ama maskaxeed.
Sidoo kale waxtar u leh hidderenitis suppurativa iyo xaaladaha qaarkood ee mobacsan rosacea. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu caawiyo daweynta echthyosis baaxada leh, ichthyosis lamelaha iyo waxaa loo isticmaalaa kiisaska xeroderma pigmentosum si loo yareeyo keratoses. Isotretinoinhas ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo xaalad aad u dhif u ah fibrodysplasia oogada tartiib tartiib ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawaynta neuroblastoma, oo ah nooc ka mid ah kansarka naasaha.
Daaweynta Isotretinoin ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in ay waxtarka ka soo horjeeddo burooyinka xubnaha taranka ee isticmaalka tijaabada ah, laakiin marar dhif ah ayaa loo adeegsadaa tilmaamahan iyada oo ay jiraan daaweyno waxtar leh. Isotretinoin wuxuu u taagi karaa qaab waxtar leh oo haboon oo nidaam ah oo loogu talagalay qaabka daaweynta reetilomata acuminata (RCA) ee makaanka afkiisa. Wadamada badankood daweyntan ayaa hadda aan la ansixin oo kaliya ayaa loo isticmaalaa haddii daaweynaha kale uu ku guuldareysto.
Isotretinoin Root Powder (CAS 4759-48-2)
Suuq-geynta Shirkadda Root Isotretinoin
Sida loo iibsado budada Isotretinoin (CAS 4759-48-2) laga bilaabo AASraw
AASraw waxay bixisaa nadiif ah 99% budo cayriin ah Isotretinoin si jirka jirka ama shaybaarrada dhulka loogu isticmaalo isticmaalka afka.
Isotretinoin Rootiga Rootiga ah: